filename.xls 'Enweghị ike ịnweta
Home ngwaahịa DataNumen Excel Repair filename.xls 'Enweghị ike ịnweta.
Zuru ezu Ozi banyere "filename.xls 'Ike-enweta" Njehie
Mgbe ị mepee Excel XLS ma ọ bụ XLSX rụrụ arụ ma ọ bụ nke rụrụ arụ na Microsoft Excel, ị ga-ahụ ozi njehie na-esonụ:
'filename.xls' enweghị ike ịnweta. Faịlụ nwere ike na-agụ-naanị, ma ọ bụ ị nwere ike ịnwa ịnweta ebe a na-agụ naanị. Ma ọ bụ, ihe nkesa nke akwụkwọ ahụ echekwara nwere ike ọ gaghị aza.
ebe 'filename.xls' bu aha nbibi Excel.
Mgbe faịlụ Excel XLS ma ọ bụ XLSX rụrụ arụ na Microsoft Excel enweghị ike ịmata ya, Excel nwere ike ịkọ njehie a. Ozi njehie na-eduhie ebe ọ na-ekwu na enweghị ike ịnweta faịlụ ahụ n'ihi na a na-agụ ya naanị. Agbanyeghị, ọbụlagodi faịlụ ahụ abụghị AKW readKWỌ naanị, ma ọ bụrụ na ọ rụrụ arụ, Excel ka ga-ekwupụta njehie a n'amaghị ama.
Nwere ike ibu ụzọ chọpụta ma ọ bụrụ na faịlụ a na-agụ naanị, na ebe a na-agụ naanị, ma ọ bụ na sava dịpụrụ adịpụ. Ọ bụrụ na faịlụ ahụ dị na ebe a na-agụ naanị ma ọ bụ na sava dịpụrụ adịpụ, wee gbalịa idetuo faịlụ ahụ site na ebe a na-agụ naanị ma ọ bụ ihe nkesa gaa na draịva ederede na kọmpụta mpaghara. Gbaa mbọ hụ na iwepu naanị agụ nke faịlụ Excel.
Ọ bụrụ na enweghị ike imeghe faịlụ Excel, mgbe ahụ anyị nwere ike ikwenye na faịlụ ahụ rụrụ arụ. Nwere ike ibu ụzọ jiri Ọrụ nrụzi Excel rụrụ ịrụkwa faịlụ Excel mebiri emebi. Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ, yabụ naanị DataNumen Excel Repair nwere ike inyere gị aka.
Ihe nlele nke XLS rụrụ arụ nke ga-akpata njehie ahụ. Njehie5.xls
Faịlụ natara site DataNumen Excel Repair: Njehie5_fixed.xls